Okuphakelayo isiga sesando sesando
In inqubo yokuphakelwa kokuphakelayo kungenzeka kube nezithako eziningi ezidinga uhlobo oluthile lokucutshungulwa. Lezi zithako zokuphakelwa zifaka okusanhlamvu okusanhlamvu okuhlanganisiwe, ummbila odinga ukuncishiswa kosayizi bezinhlayiyana ozothuthukisa ukusebenza kwesithako futhi ukhuphule inani lesondlo. Kunezindlela eziningi zokufeza lokhu kuncishiswa kwezinhlayiya, Ukukhetha indlela efanele yokugaya ukudla kwezilwane kuyisinqumo esibucayi ngoba kuthinta ngqo ukuhlangana, Ukudla kanye nokusebenza kwemfuyo yakho kakhulu. Isigaxa sokuphakela esifanele esidingekayo sinqunywa ngosayizi wokuphakelayo, isilinganiso sokuphakelwa, izimo zokusebenza nokukhiqizwayo komkhiqizo okufiswayo ukuze kusebenze okuphakelayo.
lapha sibheke ukusebenzisa isando se-hammer-mills.Victor inikezela ngezaga ezihlukile zesando se-hammer mill eziguqula ukuguquguquka kwezilwane ezithambile nezilukhuni ngokusebenzisa inqubo yokudonsa ye-gram yesando sokukhiqiza izinhlayiya eziphelile.
Le milando yesando isetshenziselwa ukugaya i-bio-mass efana notshani, isiqu, kanye nezinkuni izinkuni, igatsha lesihlahla kanye nemfucuza yehlathi kube yimpuphu engaphansi kuka-3-5mm, okusho okulungile ngaphambi kokufaka i-pelletzing ne-briquette. Futhi kungumshini ofanele wokulima okwenziwa njengokutshala okusomile noma okusha kwe-yam, ithanga,ilayisi nezinye izitshalo, ummbila, ukolweni, ubhontshisi wazo zonke okusanhlamvu.
Kuqhathaniswa nolunye uhlobo lwamakhilogremu, isando sethu sokugaya isando sinobuchule ngokulandelayo:
– sebenza nganoma iyiphi impahla noma ifreyimu efrayiwe
– tshala imali yokuqala uma uyiqhathanisa ne-roller mill
– Kudingeka ukulungiswa okuncane
– I-granule echotshozwe ngesando se-hammer izoba eyindilinga ngokujwayelekile. Ingaphezulu lezinhlayiya libonakala liliwohluzo